It is me. Ko Niknayman.: နအဖ၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေမူကြမ်းမှာ ဒါတွေပါတယ်
+ မည်သည့်လွှတ်တော်၏ သဘောတူညီချက်ကိုမှ ရယူရန်မလိုဘဲ အမျိုးသား ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေး ကောင်စီ၏ အကြံပြုချက်ဖြင့်သာ နိုင်ငံတော်သမက ကာကွယ်ရေး ဦးစီချုပ်ကို ခန့်ထားရခြင်း၊ လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့် ပေးခြင်းတို ပြုလုပ်ရသည်။
မှတ်ချက်။။ ။။ မဇ္ဈိမသတင်းဌာန ၏ Tuesday, 18 March 2008 13:35 - မြန်မာစံတော်ချိန် သတင်းကိုကူးယူဖော်ပြထားပါသည်.
စာဖတ်သူများဖတ်ရှု ၍ တရားမျှတမှုရှိမရှိ..ဆုံးဖြတ်စဉ်းစားပေးကြပါခင်ဗျား
Posted by အာဇာနည် at 8:54 PM